Saga ady tanteraka: seza fiandrianan'i Britannia, ho avy tsy ho ela amin'ny macOS sy Linux | Avy amin'ny mac aho
Saga tanteraka amin'ny ankapobeny: seza fiandrianan'i Britannia hifindra amin'ny taona 878 aorian'i Kristy isika ary hiaina ny fahirano ny Vikings hanohitra ny Mpanjaka anglisy Alfred the Great. Amin'ity tranga ity dia ho mafy ny ady ary tsy mila mitolo-batana. Amin'ity tranga ity, ny mpilalao dia hipetraka amin'ny teboka maro any Angletera hiady aorian'ny fandresen'i Alfred the Great tao amin'ny Battle of Ethandun, izay nitana mafy ireo mpanafika an'i Viking ary nanova ny hoavin'ny Nosy Britanika.
Ity dia lalao iray avy amin'ny lalao angano Total War stratehiya lalao izay tsy isalasalana fa manampy ny zava-baovao ao Saga. Amin'ity tranga ity dia ho vavolombelona sy mpandray anjara amin'ny fifandonana izay i Vikings, mpanjaka anglisy, Skoto, Irlandy avy any amin'ny faritr'i Wales Mikatsaka ny hanjakazaka amin'ny faritany izy ireo.
Ho an'ny mpampiasa manana kaonty Steam na mivantana amin'ny tranokala Feral Interactive ny lalao, izay Tsy mazava ny daty nanombohana azy na ny vidiny hanana an'ity lalao vaovao ity ho an'ny mpampiasa Mac. Amin'ity tranga ity, ny mpilalao dia hitarika ny iray amin'ireo fizarana folo, samy manana ny fitantaran'izy ireo manokana ary handray fanapahan-kevitra hanova ny tantara amin'ny fomba tsy ampoizina sy mahaliana.
Manambatra ady lehibe amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ny paikady mahavariana mifandimby, ny Thrones of Britannia dia mihaika ny mpilalao hanangana sy hiaro fanjakana. Hatao hosoka ny fifanarahana, hotantanana ny fametrahana ny tanàna, hatsangana ny tafika ary hiroso amin'ny fampielezanaana avy any amin'ny faritra be ranomandry any Skotlandia Gaelic ka hatrany amin'ny saha maitso any Anglo-Saxon Kent isika izay misy tantara vaovao sy tetika misy kintana ny sasany amin'ireo olo-malaza manan-tantara izay tsy nanana ny toerany tamin'ny Ady Total hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Games » Saga ady tanteraka: seza fiandrianan'i Britannia, ho avy tsy ho ela amin'ny macOS sy Linux